Garowe: Dood ka taagan 21 garsoore oo dawlada Puntland ay shaqada ka eriday; afhayeenka garsoorayaasha oo la xiray. – Radio Daljir
Garowe: Dood ka taagan 21 garsoore oo dawlada Puntland ay shaqada ka eriday; afhayeenka garsoorayaasha oo la xiray.
Garowe, June 15 – Dhammaadkii bishii May M/weynaha dawladda Puntland ayaa shaqadii ka cayriyey 21 garsoore oo ka hawl-gali jiray gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee Puntland. Dood ayaa ka curatay shaqo ka cayrinta garsoorayaasha, iyo xalaal ahaanshaha qoddobada loo cuskaday.
Ruqsanyta garsoonayaasha oo ku soo baxday wareegto lamberkeedu ahaa LR/56, ku taariikhaysnayd 19/05/2011, kana soo baxday xafiiska M/weyne Cabdiraxamaan Maxamed Maxamuud ‘Faroole’ ayaa loo cuskaday dhawr sababood oo la waafajiyey dastuurka dawladda Puntland sida ku cad hadal-qoraaleedka M/weynaha.
Wareegtada M/weynaha ayaa tilmaamaysay shaqo-ka-eryidda garsoorayaashan in looga golleeyahay:
i) tayaynta hay’adda garsoorka Puntland,
ii) yaraynta shaqaalaha garsoorka, iyo
iii) sidoo kale qaadasho talo soo jeedin ka timid guddiga sare ee garsoorka Puntland sida qoraalkaan lagu caddeeyey.
21-ka garsoore ee shaqada laga cayriyey ayaa u badan garsoorayaashii ka hawl-gali jiray degmooyinka ka dadban waddada laamiga ah, gaar ahaan kuwa ka durugsan, iyada oo dhammaan la tirtiray maxkamadihii ku yaalay.
Ruqsanta garsoorayaasha ayaa waxaa ka furantay dood weyn oo shaki galinaysa sharci ahaansha shaqo ka fariisintooda, iyadoo badanka garsoonayaashaasi iyo sharci-yaqaanno badan oo kale ay ku doodayaan in aan waddo sax ah loo soo marin habka shaqo ka joojintooda.
Waxaa la xiray mid ka mid ah garsoorayaasha oo lagu magacaabo Maxamed Maxamuud Dhuuke oo ahaa afhayeenka 21-ka garsoore ee la ruqseeyey, walow aan la caddayn dambiga uu galay.
Haddaba halkaan ka dhagasto warbixin koobaysa, aanna ka diyaarinay wareegtada M/weynaha, waraysiyo qaar garsoorayaasha la ruqseeyey, sharci-yaqaanno iyo wax-ku-ool kale.
C/fitaax C. Geedi,